निन्टेन्डो र LEGO टीम माथि सुपर LEGO मारियो सिर्जना गर्न क्रिएटिव अनलाइन
गम्भीरतापूर्वक कि यदि हामीलाई लाग्छ कि निन्टेन्डोको मारियो "pixelated" इंटर्नमा हुर्कियो, यसलाई LEGO ग्रिड सँगै राख्ने विचार केवल एक राम्रो विचार मात्र हो। र यो वास्तवमै के भएको छ, निन्टेन्डो र LEGO सुपर लेगो मारियोको लागि सेनामा सामेल हुन्छन्।
एक नयाँ उत्पाद सिर्जना गर्न को लागी एक सहकार्य र यसले निश्चित रूपमा दुई ठूलो फाइदाहरु प्रदान गर्दछ। खेलौना आफैंको लागि मात्र होईन, तर उत्पन्न हुने सबै कुराको लागि, एक सुपर लेगो मारियो फिल्म? भिडियो गेम?
क्षणको लागि हामी रहन्छौं एक LEGO मारियो निर्माण सेट को सामने र त्यो शानदार ढंगमा दुबै LEGO निर्माण ब्लकहरू सबै डिजिटल र जापानी कम्पनीको टेक्नोलोजीसँग जोड्दछ।
वास्तवमा, मारियो को फिगर आफ्नो अनुहार र शरीरमा vinyls समावेश गर्दछ, र तपाईं ब्लकहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ सिक्काहरू स collect्कलन गर्न र स्तरहरू मार्फत प्रगति गर्न। यस निर्माण सेटको अर्को मुख्य विशेषताहरू यो हो कि मारियोको अनुहारको भाव थियो र ती परिवर्तन हुन्छ जब हामी मारियोलाई आगोको बोकलमा राख्छौं।
यस भवन सेट को एक लक्ष्य हो सुपर मारियो निर्माताको सार ल्याउनुहोस्, भिडियो खेल जहाँ तपाईं आफैले आफ्नै स्तरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए हामी मारियोलाई भौतिक रूपमा पूर्ण रूपमा ल्याउने कुरा गर्दैछौं र निन्टेन्डोको जादू र यसका सेटले यसका पात्रहरू लिएर जान कसलाई पुग्ने छैन?
यस समयमा सबै पूर्ण विनिर्देशहरू र सेटको मूल्य थाहा छैन, त्यसैले हामी यसमा हात लिनको लागि हामीले केही बेर कुर्नु पर्छ। मारियोको नयाँ साहसिक सबै चीजबाट लिइएको र LEGO निर्माण ब्लकहरू। एकदम राम्रो पहल अरूले जस्तो तपाईले पाउनु भयो हालका वर्षहरूमा डेनिश खेलौना कम्पनी।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » के तपाईं मारियोलाई LEGO को रूपमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा वास्तविक हो: निन्टेन्डो र LEGO टीम यसको लागि अप